Breaking…अन्तत : नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षकमा शैलेश थापा नै चुनिए ! को हुन् थापा ? – Online Nepal
July 7, 2020 207
काठमाडौं/सरकारले अतिरिक्त महानिरिक्षक-एआईजी शैलेस थापालाई नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक-आईजिपीमा बढुवा गरेको छ। मंगलबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापालाई बढुवा गर्दै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो। उनले बिहीबारदेखि कार्यभार सम्हाल्नेछन्। २०७९ बैशाख १८ सम्म उनी नेपाल प्रहरीको आईजिपी रहनेछन्। वर्तमान आईजिपी ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण बुधबारपछि अवकाश पाउँदैछन्। उनले २०७६ माघ २९ गते आईजिपीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
अबको आईजिपीका लागि थापाबाहेक हरि पाल मात्र उमेद्ध्वार थिए। एआईजीमध्येबाट आईजिपी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ। हाल रहेका तीन जना एआईजीमध्ये तारिणिप्रसाद लम्सालले पनि बुधबारपछि अवकाश पाउँदैछन्। वर्तमान आईजिपी ज्ञवाली र लम्सालले २०४७ साल असार २५ गतेदेखि नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरिक्षकबाट सेवा सुरु गरेका थिए।
थापा र पालले एकै दिन अर्थात २०४९ बैशाख १९ गते प्रहरी निरिक्षकबाट सेवा सुरु गरेका हुन्। गत फागुनमा एआईजीमा बढुवा हुँदा आफ्ना ब्याचीमध्ये थापा पहिलो र पाल दोस्रो नम्बरमा थिए। थापा एसएसपी र डीआईजी हुँदापनि ब्याचीमध्ये पहिलो नम्बरमा थिए।प्रहरी निरिक्षकमा नाम निकाल्दा पनि पहिलो नम्बरमा रहेका थापाले पहिलो नम्बरमै रहेर सेवाबाट अवकाश पाउने छन्। उनी आफ्नै ब्याची र प्रतिस्पर्धीमाझ पनि लोकप्रिय थिए। व्यावशायीक छवि र विवादरहित ट्रयाक रेकर्डका कारण उनले पहिलैदेखि संगठनको भावी नेतृत्व दावेदारका रुपमा हेरिएको थियो।
भक्तपुरको कटुन्जेका रैथाने थापा २०२५ साल मंसिर २३ गते जन्मिएका हुन्। प्रहरी निरिक्षक रहँदा उनले प्रहरी एकेडेमी, आईजिपी सचिवालय, सिन्धुपाल्चोक र सल्यानमा काम गरेका थिए।उनले नायब उपरिक्षक-डीएसपीमा धादिङ, महानिरिक्षक सचिवालय र प्रहरी एकेडेमीमा काम गरेका थिए। प्रहरी उपरिक्षक-एसपीका रुपमा उनले झापा र कास्कीको नेतृत्व गरेका थिए भने विषेश ब्युरो,प्रहरी एकेडेमी र आईजिपी सचिवालयमा पनि काम गरेका थिए।
वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक-एसएसपीमा बढुवा भएपछि उनी आईजिपी सचिवालय र केन्द्रीय प्रवक्ताको भूमिकामा पनि थिए। नायब महानिरिक्षक-डीआईजी भएपछि उनले महानगरीय प्रहरी कार्यालय-मेट्रोको नेतृत्व गरे भने केन्द्रीय प्रवक्ताका रुपमा आईजिपी सचिवालयमा पनि रहे।
एआईजीमा बढुवा भएपछि उनी मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा निरन्तर छन्। उनका बुवा शम्भु थापा क्षेत्री पनि नेपाल प्रहरीको नायब महानिरिक्षक-डीआईजीसम्म भएका थिए। शैलेश परिवारका दुई छोरामध्ये कान्छा हुन्। जेठा छोरा पनि सरकारी सेवामा छन्।थापा नेपाल प्रहरीको २८ औँ आईजिपी हुनेछन्। थापा २०५८ मा डीएसपी, २०६७ मा एसपी, २०७४ मा एसएसपी र २०७५ सालमा डीआईजीमा बढुवा भएका थिए। सबैमा ब्याचीमध्ये पहिलो नम्बरमा थिए।
पहिलो नम्बरलाई प्राथमिकता
Prevखेत जोतेर फर्किदै गर्दा आफैँले चलाएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परि नेकपा नेताअधि कारीको नि धन
Nextसरिता गिरीको स्थानमा लीला सिटौला सांसद बन्ने
र्‍यापिड टेस्टबाट राजविराजमा २ जनामा को*रोना पोजेटिभ देखियाे